သန်လျှင်၊ ကျိုက်ခေါက်ဘုရားကုန်းရှိ ဆုတောင်းပြည့် ပရဟိတဂေဟာအကြောင်း သိသင့်တာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သန်လျှင်၊ ကျိုက်ခေါက်ဘုရားကုန်းရှိ ဆုတောင်းပြည့် ပရဟိတဂေဟာအကြောင်း သိသင့်တာ
သန်လျှင်၊ ကျိုက်ခေါက်ဘုရားကုန်းရှိ ဆုတောင်းပြည့် ပရဟိတဂေဟာအကြောင်း သိသင့်တာ
- para hita
Posted by para hita on Feb 6, 2012 in Copy/Paste |5comments
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ ကျောက်ရေတွင်းကျေးရွာ (ဘုရားကုန်း)ရှိ
ဆုတောင်းပြည့် တိုင်းရင်းသားလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပရဟိတဂေဟာတွင် မဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒန္တနန္ဒ၀ံသ ထေရ်ရှင်သူမြတ်မှ ကြီးမှူးကာ
၁။ မိဘမဲ့၍ ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီး ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု လိုအပ်နေသော ကလေးများကို ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခြင်း၊
၂။ ကလေးသူငယ်များအတွက် လိုအပ်သော အကြင်နာများ၊ မေတ္တာတရားဖြင့် နွေးထွေးလုံခြုံမှု ရရှိစေခြင်း၊
၃။ ယဉ်ကျေးလိမ္မာသော နိုင်ငံသားကောင်း၊ သမီးကောင်းများ ဖြစ်လာစေခြင်း၊
၄။ ကလေးသူငယ်တို့၏ ပါရမီနှင့် ၀ါသနာအရ လုံ့လ၀ိရိယဖြင့် အားထုတ်ကြိုးစားစေခြင်းဖြင့် အသက်မွေး အတတ်ပညာ တစ်ခုခု ရရှိစေပြီး မိမိဘ၀ရပ်တည်နိုင်စေခြင်း၊
၅။ လေလွင့် ပျက်စီးမှုနှင့် ဒုစရိုက်သားကောင်များဘ၀ မရောက်စေဘဲ နိုင်ငံအကျိုးပြု ကာယ၊ ဉာဏလုပ်သား ကောင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်း၊
၆။ ပညာရေးအား သင်ယူနိုင်စွမ်းရှိသည်အထိ ဆုံးခန်းတိုင်အောင် သင်ကြားပေးပြီး မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက် အပြည့်ဖြင့်ဘ၀တွင် ရပ်တည်နိုင်စေခြင်း
စသော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက် ဆောင်ရွက်နေမှုများအား ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
ဆရာတော်သည် (၁၉၉၀-ခုနှစ်)မှစ၍ ပရဟိတလုပ်ငန်းကို မိဘမဲ့ကလေး (၃၀) ဦးဖြင့် စတင်တည်ထောင်တော် မူခဲ့ပါသည်။ (၁၉၉၃- ခုနှစ်) မေလ(၂၂) ရက်တွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ပရဟိတဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းအဖြစ် အသိအမှတ် ပြုခဲ့ပါသည်။
ဆရာတော်သည် ထိုအချိန်မှစ၍ တောင်တန်းနှင့် နယ်စပ်ဒေသ အသီးသီးမှ အသိဉာဏ် မဖွံ့ဖြိုးသေးသော မိဘမဲ့နှင့် ဆင်းရဲချို့တဲ့သော ကလေးငယ်များကို ပညာသင်ကြား နိုင်ရေးနှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဘာသာတရားအပေါ်၌ သက်ဝင် ယုံကြည်နိုင်ရေးတို့ကို မေတ္တာရှေးရှု၍ ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါသည်။
ဆရာတော် စောင့်ရှောက်ထားသော ကလေးငယ်များကတော့ တောင်တန်းနှင့် နယ်စပ်ဒေသများမှ မိဘမဲ့ ဆင်းရဲချို့တဲ့သော တိုင်းရင်းသားကလေးငယ်များနှင့် ကျောက်ရေတွင်းကျေးရွာ ( ဘုရားကုန်းအုပ်စု ) ပတ်ဝန်းကျင် အနီးအနားရှိ၊ မိဘမဲ့နှင့် ဆင်းရဲချို့တဲ့သော ကလေးငယ်များ ဖြစ်ကြပါသည်။
ယခုအချိန် (၂၀၁၁) တွင် ကျောင်းအိပ် ကျောင်းစားအနေဖြင့်၊ မိဘမဲ့ ဆင်းရဲချို့တဲ့သည့် တိုင်းရင်းသား၊ တိုင်းရင်းသူ (၅၀၀) ဦးနှင့်၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှ အသီးသီးမှလာရောက်သင်ကြားကြသော မိဘမဲ့ ဆင်းရဲချို့တဲ့သော ကျောင်းသားကျောင်းသူ (၁၇၀၀) ဦး စုစုပေါင်း (၂၂၀၀)ဦးတို့ ရှိကြပါသည်။ ၁၉၉၀ – ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့သည့် ဤပရဟိတကျောင်းမှ ယခုအချိန်ထိ ဘွဲ့ရ (၃၀) ဦးနှင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်ပြီး ကျောင်းသား ကျောင်းသူ (၁၂၁) ဦးတို့ကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တနန္ဒ၀ံသတည်ထောင်ထားသော ဆုတောင်းပြည့် တိုင်းရင်းသားလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပရဟိတဂေဟာအကြောင်းကို www.suutaungpyae.com website နှင့် ဆုတောင်ပြည့် facebook စာမျက်နှာ တို့တွင် လေ့လာသိရှိနိုင်ပါသည်။
About para hita
para hita has written 1 post in this Website..
View all posts by para hita →
ဆင်းရဲချို့တဲ့ မိဘမဲ့ ကျောင်းအိပ်၊ ကျောင်းစား တိုင်းရင်းသူ၊ တိုင်းရင်းသား ကလေးငယ် (၅၀၀)၏ နေ့စဉ် စား၊ ၀တ်၊ နေရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ကလေးသူငယ် (၂၀၀၀)ကျော်တို့၏ ပညာရေး၊ လိမ္မာယဉ်ကျေးစေရေးတာဝန်တွေကို ယူထားသည့် ဆရာတော်၏ မေတ္တာထုက ကြီးမားလှပါတယ် ဘုရား။
မိဘမဲ့နှင့် ဆင်းရဲချို့တဲ့သော ကလေးငယ်များကိုစောင့် ရှောက်ထားသော ဆ၇ာတော်ဧ။်
အနှိုင်းမဲ့ သော မေတ္တာအား ကြည်ညိုလေးစား မိပါတယ်။
ဆ၇ာတော်ကဲ့ သို့ ကာယကံ မေတ္တာကြီးမား၍ စွမ်းစွမ်းတမံ စောင့်ေ၇ှာက်မှုပေးနိုင်သော သူများ မြန်မာပြည်မှာ
များများရှိလေ ကောင်းလေ ပါဘဲ။
ယနေ့ခေတ် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီး အင်္ဂါ (၅) ပါး
” စားပြီး အိပ်ပြန် အနှိပ်ခံ၊
ထိုမှ တစ်ဖန် ရေချိုးပြန်၊
ကျောင်းထိုင် ဖြစ်ရန် ဤငါးတန်၊
မှန်မှန် ကျင့်ကြံပွား၊ ”
ဆိုတဲ့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးများနှင့် လွန်စွာမှ ကွာခြားလှပါလေတကား။
အခုပို.စ်လေးကို သေသေချာချာတင်ပေးလို.ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်တို. အခုရွာသူ၊ရွာသားတွေစုပေါင်းအလှူတွေလုပ်နေကြတယ်လေ…. နောက်တစ်ခေါက်အဆင်ပြေပြေနဲ. စုနိုင်ရင် အဲဒီလို ပရဟိတ ကျောင်းတွေ သွားလှူဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ်ဗျာ….
အခုလို ပရဟိတကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အကျိုးရှိရှိလုပ်နိုင်တာကို အားပေးတယ်… သင်ကြားပေးနေတဲ့ ဆရာ၊ဆရာမများကိုလဲ လေးစားပါတယ်…
ကျောင်းသားမိဘတွေဆီကလည်း လိုအပ်တာထက်ပိုမိုယူပြီး တစ်လကို(၁၅၀၀၀၀ိ)ကျပ်လောက်တောင်မှမကျေနပ်ချင်ကြတဲ့
” ပီပီလေးစား အားရှိပါ၏ဆိုတဲ့ ” ဆရာ၊ဆရာမများနဲ့စာရင်တော့ အဲ့ဒီပရဟိတဂေဟာက ဆရာ/ဆရာမတွေကို အားရပါးရ သာဓုခေါ်မိလိုက်ရပြန်ပါပြီ…။